ဆက်ဆီ ၀တ်စုံလေးနဲ့ ကိတ်လွန်းနေတဲ့ ရင် အစုံကို လှစ်ဟပြသလိုက်တဲ့ မှူးမှူး – Shwe Sar
ဆက်ဆီ ၀တ်စုံလေးနဲ့ ကိတ်လွန်းနေတဲ့ ရင် အစုံကို လှစ်ဟပြသလိုက်တဲ့ မှူးမှူး
photo model အမှူး က တော့ ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုရော မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေရဲ့ ရှေ့ကို ချပြလေ့ရှိပါတယ်။သူမကတော့ ယခုမှာ အသည်းယားလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းနေတဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကို လှုပ်ခပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်
သူမရဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်အမှူးရဲ့ ကြွေလောက်စရာ ကောင်း လွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အမှူး က တော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ photo model တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်ကို တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ် အမို က်စားဖက်ရှင်လေးတွေ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး ချစ်စရောကာင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေးတွေ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အ မာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ photo model တစ်ယောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။.ယခုအခါမှာ လည်း ပိုက်ဆံရှိဖို့မ လိုဘူးမောင်လေးရှိရင်…. အ မှိုက်ကောက်ရလဲ ဖစ်တယ်နော် ဆိုပြီး ပုံလေးတွေကို မျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်
Photo _ xmue xmue
photo model အမှူး က တော့ ယောကျြားလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုရော မိနျးကလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကိုပါ အခိုငျအမာရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှရေဲ့ ရှကေို့ ခပြွလရှေိ့ပါတယျ။သူမကတော့ ယခုမှာ အသညျးယားလောကျအောငျ ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးနတေဲ့ အလနျးစား ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ရငျကို လှုပျခပျသှားစခေဲ့ပါတယျ
သူမရဲ့ လှတျလပျပေါ့ပါးတဲ့ ဖကျရှငျလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးနခေဲ့တဲ့ ပုံရိပျလေးတှဟော ပရိသတျတှကေို အခဈြတှေ ပိုစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါ တယျခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မျောဒယျအမှူးရဲ့ ကွှလေောကျစရာ ကောငျး လှနျးတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနတေဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပွီး အဆိုပါပုံရိပျလေးတှကေို အောကျမှာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
အမှူး က တော့ လကျရှိမှာ အောငျမွငျလကျြ ရှိနတေဲ့ photo model တဈယောကျဖွဈပွီး ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျကို တငျပေးလရှေိ့တဲ့ သူပဲ ဖွဈပါတယျ အမို ကျစားဖကျရှငျလေးတှေ အလနျးစား ဖကျရှငျလေးတှေ ကို ဝတျဆငျလရှေိ့ပွီး ခဈြစရောကာငျးလှနျး တဲ့ အပွုံးလေးတှေ ကို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အခိုငျအ မာရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ photo model တဈယောပဲ ဖွဈပါတယျ။.ယခုအခါမှာ လညျး ပိုကျဆံရှိဖို့မ လိုဘူးမောငျလေးရှိရငျ…. အ မှိုကျကောကျရလဲ ဖဈတယျနျော ဆိုပွီး ပုံလေးတှကေို မြှဝထေားတာဖွဈပါတယျ
Previous post တင်းရင်း ပြည့်ကိတ်နေတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေး ပေါ်လွင်နေတဲ့ မျက်ဝန်း
Next post ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ တင်ပေးလာတဲ့ မေရတီဇော်
ခပ်လန်းလန်း ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ကိုရီးယားမလေး တစ်ယောက်လို ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းနေတဲ့ မေရတီဇော်
အပြာရောင် ဆက်ဆီ ကျကျ ကိုယ်ကျပ်ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ထင်ရှား ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
ခပ်မိုက်မိုက် စတိုင်လ် ဖက်ရှင်လေးနဲ့စမတ်ကျ လှပ လွန်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလာတဲ့ သင်းရတီခင်
ဆက်ဆီ ကျကျ ရွှေဝါရောင် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးနေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလာတဲ့ မတ်မတ် သင်ဇာ
ပါးလွှာတဲ့ ဇာပါး ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အတွင်းသား အလှ တွေ ကို လှစ်ဟပြသလိုက်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်